Daahir Rayaale Oo sababeeyay Asbaabaha uu u laalay Murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen | FooreNews
Home wararka Daahir Rayaale Oo sababeeyay Asbaabaha uu u laalay Murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen
Daahir Rayaale Oo sababeeyay Asbaabaha uu u laalay Murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen
fooreJan 05, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)-Madaxweynihii hore ee Somaliland ahna Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UDUB Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa sheegay inuu laalay go’aankii shalay garabka Axmed Yuusuf Yaasiin ay ugu doorteen murashaxa xisbigaasi.
Daahir Rayaale Kaahin ka hadlayay xaalada xisbigiisa kala qeybsan wuxuu yidhi “Runtii intii muddo ah dalka waan ka soo maqnaa inay shirkii Golaha Dhexe qabsadaanna waxaan awood u siiyay ku xigeenkaygii. Way qabsadeen kalfadhigii Golaha dhexena way doorteen. Waxa yimid fikir ah aan murashax madaxweyne samayno waxaan idhi sameeya haddii la isku raacayo, laakiin warka aan maqlay maalmihii la soo dhaafay waxa I soo gaadhay in la isku khilaafsan yahay markaan taas ogaaday waxaan email u diray Ku xigeenkayga aan ugu sheegayo in haddii xisbigu laba garab noqonaya suurto gal ma aha ee fikirkaasi waa la joojinayaa.doorashada Goleyaasha deegaanka ka dib baana aanu qaban doonaa murashaxnimada madaxweynaha.”
“Waxaan idhi ha la ila sugo, nasiib darro may dhicin waxaan maqlay in shalay qeyb uu Ku xigeenkaygii ugu qabtay shir oo uu leeyahay nin gacanta ha loo taago. Qeyb kalena ay fadhiisatay xaruntii xisbiga arrintaasi waxaan u arkaa inaanay ahayn wax xisbiga UDUB looga bartay. Wax lagu heshiiyay ayaana wax ku dhammaan karaan,”ayuu yidi Daahir Rayaale Kaahin oo maanta u waramayay laanta Afsoomaaliga ee idaacadda VOA-da.
Guddoomiyaha UDUB waxa uu sheegay inaanay suurto gal ahayn in xisbigooda la iibiyo, waxaanu yidhi “Qofku aha inuu xisbiga lacag siisto oo uu iibiyo, waxaan qabaa in wada hadal laga yeesho oo heshiis laga gaadho, ninka la magacaabay iyo ninka laga tagay midna macno iima samaynayo, waxa macno ii samaynaya go’aanka xisbiga UDUB ka soo baxay ma yahay mid heshiis lagu yahay.”
Daahir Rayaale waxa uu sheegay in Jamaal Cali Xuseen aanu hore uga tirsanayn xisbigiisa hase yeeshee uu yahay muwaadin xiligan ku soo biiray.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay inuu dhawaan dalka iman doona isla markaana la dooran doono murashaxa xisbiga UDUB doorashada Goleyaasha deegaanka ka dib.
Previous PostXukuumada Somaliland oo shaacisay magacyada saqaal nin oo ku eedaysan dilkii seemaal Next PostMadaxweyne Siilaanyo oo sheegay inay xukuumadiisu dedaal gelinayso kor u qaadista ciyaaraha